भोलि कार्तिक ११ गते आइतबार, तपाईको दिन कसरी बित्ला? हेर्नुहोस् भोलिको राशिफल! - पलपलका खबर
जीवनशैली / समाचार
भोलि कार्तिक ११ गते आइतबार, तपाईको दिन कसरी बित्ला? हेर्नुहोस् भोलिको राशिफल!
October 27, 2018 - by Palpalka Khabar - LeaveaComment
भोलिको दिन तपाईको एकदमै शुखद रहने देखिन्छ। भोलि तपाईको साथी र आफन्तसँग भेटघाटसँगै मिठो भलाकुशारी रहने देखिन्छ। भोलि तपाईको दिगो कामको सुरुवात हुने दिन परको छ भने भोलि यात्रा गर्नको लागि एकदमै राम्रो दिन रहेको छ। भोलि तपाईको अध्ययनमा लगाभ बढेर जाने देखिन्छ। भोलि तपाईको आर्थिक पक्ष सवलनै रहला।
भोलि तपाईको श्रमको उचित मूल्यांकन भए पनि प्रतिफल हातपार्न गार्हो रहने देखिन्छ। भोलि तपाईबाट कुनै पनि प्रकारको अविचारी कदम नचलोस भन्नको लागि तपाई सजक रहनु पर्ने देखिन्छ। भोलि तपाईलाई स्वास्थ्यले खासै साथ नदिने देखिन्छ भने भोलि तपाईलाई बिना कारण चिन्ता बढेर जाने देखिन्छ। परिवारमा विरोध रहन सक्ला।
भोलि तपाईको सुन्दर पहिरनले व्यक्तित्वमा निखारता देखाउने देखिन्छ भने भोलि कुनै पनि प्रकारको सभा समारोहमा भंग लिने अवसर मिल्ने देखिन्छ। भोलि सामाजिक, आर्थिक तथा पारिवारिक क्षत्रमा तपाईलाई लाभ मिलन सक्ला। भोलि तपाईलाई विभिन्न अवसर प्राप्त हुने देखिन्छ भने प्रतिक्षित प्रतिफल मिल्ने देखिन्छ।
भोलि तपाईको जागिर अनि व्यवसायको क्षेत्रमा उच्च अधिकारीहरूसंगको सम्बन्धका कारण राम्रै लाभ मिल्ने देखिन्छ भने भोलि तपाईको रिष गर्नेहरु पनि प्रसंशामा जुट्ने देखिन्छ। भोलि तपाईको जिम्मेवारी भने बढेर जाने देखिन्छ। भोलि तपाईको धार्मिक यात्रा रहन सक्ने देखिन्छ। साथै भोलि तपाईको काम देखाएर अरूलाई आकर्षित गर्ने अवसर मिल्ने देखिन्छ।
भोलि तपाईलाई काम बिग्रने भयले सताउनेछ भने भोलि तपाईको मानसिक मात्र नभई शरीरक समस्याले पनि सताउने देखिन्छ। भोलि तपाईले खान-पानमा ध्यान राखेर अघि बढ्नु होला। भोलि यात्रा गर्दा कोहि साथमा लिएर यात्रा गरेको उचित हुने देखिन्छ। भोलि तपाईको अरूका लागि समय खर्च हुँदा आर्थिक लाभ भोलि नमिल्ने देखिन्छ।
भोलि तपाईले धैर्य साथै संयम रहनु पर्ने देखिन्छ। भोलि तपाईले आलोचित हुनु पर्ने दिन रहेको छ भने भोलि तपाईको कार्य बिग्रिएर जाने देखिन्छ। सहयोगीहरूले फाइदा लिनेछन् भने तपाईलाई धोका हुन सक्ला। नयाँ कार्यको सुरुवात स्थगित गर्नु होला। भोलि तपाईको मन भ्रमित रहने हुँदा तपाईमा आत्माविश्वाश घटेर जाने देखिन्छ।
प्रतीक्षित नतिजा उत्साहप्रद रहने भोलिको दिन तपाईको लागि एकदमै राम्रो रहने देखिन्छ। भोलि तपाईलाई सार्वजनिक मान-सम्मान मिल्ने देखिन्छ। भोलि दैनिकीबाट टाढा रहेर मनोरन्जनमा जुट्ने अवसर मिल्न सक्ला। भोलि तपाईको प्रतिपक्षीहरू पराजित रहने देखिन्छ भने परिवारबाट साथ र सहयोग मिल्ने देखिन्छ।
भोलि तपाईको व्याहारिक समस्याले याेजना रोकिन सक्ने हुँदा सजक रहनु होला। भोलि तपाईको परिवारमा खट-पट बढेर जाने देखिन्छ। भोलि केहि आकस्मिक घटनाहरूले तपाईलाई चिन्तित तुल्याउने देखिन्छ। भोलि तपाईको आर्थिक लाभ भन्दा आर्थिक घाटा बढेर जाने देखिन्छ साथै भोलि तपाईको यात्रा गर्नको लागि खासै शुभ देखिन्न।
भोलि तपाईको परिवारको स्वास्थ्य साथै शिक्षालाई लिएर चिन्ता बढ्ने देखिन्छ। भोलि तपाईको खर्च पनि बढेर जाने देखिन्छ। भोलि तपाईलाई पाचन सम्बन्धी समयले सताउने सक्ने हुँदा खान-पानमा ध्यान राख्नु होला। कामको विफलताले तपाईं भित्र निराशा ल्याउन सक्ने देखिन्छ। भोलि कानुनी कार्यबाट टाढा रहेकै तपाईको लागि उचित रहला।
भोलि तपाईको परिवारमा जम-घटको माहोल रहने देखिन्छ भने भोलि तपाईको परिवारको खुशीको लागि खर्च बढेर जाने दिन परेको छ। भोलि तपाईलाई अनिन्द्राले सताउने देखिन्छ। भोलि तपाईको व्याहारिक समस्याले याेजना स्थगन हुने अवस्था आउने देखिन्छ भने भोलि तपाईको कार्य प्रति एकाग्रता घटेर जान सक्ला। भोलि तपाईको ईर्ष्या गर्नेहरूले काममा अवरोध पुर्याउन सफल हुने देखिन्छ।
भोलि तपाईलाई मानसिक खुशी मिल्ने देखिन्छ भने भोलि तपाइको परिवारमा पनि खुसीको माहोल रहने देखिन्छ। शुभचिन्तकहरूको सुझावलाई बेवास्ता नगर्नु होला भने भोलि तपाईको खर्च मध्यान्न पछी भने बढ्न सक्ला। भोलि अध्ययनमा पनि तपाईलाई सफलता मिल्ने देखिन्छ।भोलि तपाईलाई मिहिनेतले दिगो फाइदा दिलाउन सक्ने देखिन्छ।
भोलि तपाईको आम्दानी बढाउने काम सुरु हुने देखिन्छ। भोलि तपाईलाई काममा आफन्त र साथीभाइबाट सहयोग मिल्ने दिन परेको छ। अनुसूचित कार्य पूरा हुनेछ। भोलि आय वृद्धि हुनेछ शान्ति र आनन्दको वातावरण परिवारमा रहनेछ। सुरुचिपूर्ण भोजन प्राप्त हुने भोलिको दिन तपाईको दिन सम्पुर्ण तवरबाट राम्रो देखिन्छ।
Previous Article भोलि कार्तिक १० गते शनिबार, तपाईको दिन कसरी बित्ला? हेर्नुहोस् भोलिको राशिफल!
Next Article भोलि कार्तिक १३ गते मंगलबार, तपाईको दिन कसरी बित्ला? हेर्नुहोस् भोलिको राशिफल!